ချောင်းသာ ကမ်းခြေတွင် ဈေးရောင်းချခွင့် ရရှိရေးနှင့် စွန့်လွှတ် လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေး အတ?? - Yangon Media Group
ချောင်းသာ ကမ်းခြေတွင် ဈေးရောင်းချခွင့် ရရှိရေးနှင့် စွန့်လွှတ် လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေး အတ??
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
ချောင်းသာကမ်းခြေတွင် ဈေးပြန်လည် ရောင်းချခွင့်ပြုရေးနှင့်စွန့်လွှတ်လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုကို နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီမှစတင်ကာ နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်သူအင်အား ၄ဝ တို့သည်နေပြည်တော်၊ (B-4) လမ်းဆုံမှရွှေနံ့သာရပ်ကွက်ဘော လုံးကွင်းအထိ ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ဇီး ဖြူတောင်ကျေးရွာမှ သိမ်းဆည်းခံ မြေများအား ပြန်လည်ပေးအပ်ထား သော်လည်း ယင်းသိမ်းဆည်းခံ မြေအပေါ် ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အလွဲသုံးစားပြု ရောင်းချခြင်း၊ နိုင်ငံ တော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်ကို အောက်ခြေဌာနဆိုင်ရာများမှ လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ စွန့်လွှတ်မြေများ မူလ ပိုင်ရှင်လက်ဝယ် ပြန်လည်မရရှိခြင်းနှင့် ချောင်းသာကမ်းခြေ၌ ဈေးသည်များဖယ်ရှားခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ မူလနေရာ (သို့) သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် ကမ်းခြေ စည်ပင်လှပရေးနှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင် မထိခိုက်ရန် စည်းကမ်းများ ချမှတ်ပြီး ဈေးပြန်လည်ရောင်း ချခွင့်ပြုရေး၊ ဈေးသည်များအပေါ် မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများကို နိုင်ငံတော် တာဝန်ရှိသူများ သိရှိစေရန်ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများကဟောပြောခဲ့ကြသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲဦးဆောင်သူ၊ ဦးထွန်းထွန်းဦးက”ဒီပွဲမှာကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းကသိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေတွေပါ။ သိမ်းဆည်းခံလယ် မြေတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကကျတဲ့စာ၊ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကော်မတီကသက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီတွေကိုပို့တဲ့စာပေါ့။ အဲဒီစာကျတော့ ဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဆင်းစစ်တယ်။ လယ်စစ်ကော်မတီ တွေဆင်းစစ်တယ်။ ပြီးတော့သတင်း မီဒီယာတွေမြန်မာ့အသံတွေမှာလည်းပါတယ်။ မူလပိုင်ရှင်တွေကို ပြန်ပေးမယ်။ အခုအချိန်အထိပြန် မရတဲ့အပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီမြေကွက်တွေအပေါ်မှာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အိမ်ရာကွက် တွေလုပ်ပြီး ရောင်းစားဖို့အဆင့်မှာတိုင်ကြားပေမယ့်အရေးမယူတဲ့အတွက် ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေဈေးသည်များ ဈေးပြန်လည်ရောင်းချခွင့် ရရှိရေးကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းကာ အစိုးရအဖွဲ့ထံအကြိမ်ကြိမ်စာတင်ခဲ့ ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကလည်းနေရာပြန်ချပေးဖို့ တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးတွေရော၊ လွှတ် တော်နဲ့စည်ပင်ရော အဆင့်ဆင့် ဆင်းစစ်တယ်။ ဆင်းစစ်ပြီးတော့ ဈေးသည်တွေကို နေရာပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မနှစ်ကလည်းပြန်ပေးတာမရှိဘူး။ ဒီနှစ်ကျ တော့ ရာသီချိန်မဟုတ်တဲ့ ဒေသန္တရအမိန့်ကင်းလွတ်တဲ့အချိန်မှာ ဈေးဆင်းရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေကို ကမ်းခြေစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့တွေက မတရားဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတသိအောင်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံသိအောင်၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ သိအောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ် တာဖြစ်ပါတယ်”ဟုဦးထွန်းထွန်း ဦးကပြောသည်။
ပိုင်နက် ကျူးလွန်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသော အိန္ဒိယ တံငါသည် ၆၈ ဦးကို ပါကစ္စတန် ပြန်လွှတ်ပေး
သမိုင်းမှန်များ ရေးသားရာတွင် နောက်ဆုံး တူးဖော်တွေ့ရှိထားသော စောလူးမင်းကျောက်စာနှင့် ကျော?
မြန်မာ့ဆန် တန်ချိန် သုံးသိန်းဝယ်ယူရန် MoU ရေးထိုးထားသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ၅ မတ်ဆန်တန??
ကလေး-ဟံသာဝတီ-ဂန့်ဂေါရထား စီးနင်းသည့် ခရီးသည် နည်းပါးနေသည့် အတွက် အရှုံးပေါ်နေ
နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ဆိုင်ရာ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သဘောတူညီချက်ကို ဒေသခံများ အသေအချာသိရန် လိ??
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်မြို့၌ ကျင်းပနေသော မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တိုက်ဖျ??
ယခုနှစ် တောင်ပြုန်းပွဲတော်တွင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၉ဝဝ ကျော်ချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ခန်းဈေးနှုန်းကို ကျပ်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းမှ ကျပ်နှစ်သိန်းအထိ သတ်မှတ်ထား
‘တစ်ယောက်တည်းနေတာက တစ်ခါတလေကျတော့လည်း Down သွားချင်တယ်’ မြ တ်ကေ သီအောင်
ကလေးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်ပါဝင်လျက် စည်ကားစွာ ကျင်းပမည်